हिमपात रोक्न हिउँमै बसेर पूजा ! – Khabarhouse
हिमपात रोक्न हिउँमै बसेर पूजा !
Khabar house | ६ माघ २०७६, सोमबार ०६:५७ | Comments
डोल्पा । उपल्लो डोल्पाको पुग्मो गाउँमा निरन्तर परिरहेको हिमपात रोक्न स्थानीयले हिउँमै बसेर लामा पूजा गरेका छन् । तीन दिनसम्म हिउँ पर्न नरोकिएपछि हिउँको थुप्रो मै बसेर लामा पूजा गरिएको शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका–९ पुग्मोका स्थानीय रिग्जिन बैजीले जानकारी दिए।
‘हिउँ पर्न रोकिएर घाम लागोस्’ भनेर पुग्मो गाउँका स्थानीयले सामूहिक पूजा सम्पन्न गरेको र केही मात्रामा हिउँ पर्न रोकिएको उनले बताए । हिमपहिरो खस्दा अन्नबाली तथा जनधनको समेत क्षति हुने गर्दछ । हिमपातका कारण उपल्लो डोल्पामा पाँच फिटसम्म हिउँ जमेको र घरबाहिर निष्कनसमेत कठिन भएको स्थानीयले जनाएका छन् ।
धर्म गुरु गेखो रिन्छेन ग्याल्छेनको स्तुपामा लामा पुजा गरी हिउँ पर्न रोकेर घाम लाग्न सामुहिक पु’जा गरे पछि हिउँ पर्न रोकिएको बैजीले दाबी गरे । धेरै हिउँ परेपछि ठाउँ- ठाउँमा हिम पहिरो खस्ने र त्यसबाट जन धनको ठूलो क्षति हुने भएकाले सामुहिक पुजा गरेको बैजीले बताए । हिमपातका कारण उपल्लो डोल्पामा पाँच फिटसम्म हिउँ जमेको र घरबाहिर निष्कन कठिन भएको स्थानीयले बताए ।
यो पनि, प्रतिनिधिसभा बैठक आज बस्दै : पटक पटक स्थगित हुँदै आएको प्रतिनिधिसभा बैठक आज बस्ने भएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले सभामुख उम्मेदवारको टुंगो लगाएसँगै आज बैठक बस्ने निश्चित भएको हो। यस अघि पुस ११, १६ र २७ गतेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको थियो ।
नेकपाले सभामुख उम्मेदवार टुंगो लगाउन नसक्दा बैठक स्थगित हुदै आएको थियो । आज दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा यसअघि पुस ११ गतेको बैठककै लागि तय गरिएको कार्यसूची रहने सम्भावना छ। आजको बैठकको पहिलो जिम्मेवारी सभामुख निर्वाचनको कार्यतालिका बनाउने छ । सत्तारुढ नेकपाले हिजो सभामुख पदका लागि स्थायी कमिटी सदस्य अग्नी सापकोटालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ ।
तर उप सभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेले राजीनामा दिए मात्रै त्यो बाटो खुल्नेछ । तर तुम्बाहाङफेले कहिले राजिनामा दिने स्पष्ट भैसकेको छैन । तुम्बाहाङ्फेले पनि आज राजीनामा दिने अपेक्षा नेकपाका नेताहरुले लिएका छन् । नेकपा सचिवालय बैठकले उपसभा मुख तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा दिन यसअघि नै आग्रह गरिसकेको छ।